Mi Box များအတွက် Android Oreo Update ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Xiaomi
2 May 2018 . 8:58 PM
Xiaomi ရဲ့ Mi Box ဆိုတာကတော့ အိမ်သုံးရိုးရိုး TV ကို Android Smart TV အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ လက်တစ်ဝါးစာ သေတ္တာလေးတစ်လုံးပါ။ အဆိုပါ Mi Box ကို 2016 ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတကာကိုတင်သွင်းဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ခုချိန်ထိကို လူကြိုက်များနေတဲ့ Smart Device တစ်ခုဖြစ်နေပါသေးတယ်။
Android 8.0 Oreo Rolling Xiaomi Mi Box Owners
ပိုပြီးလူကြိုက်များနေစေမယ့်အကြောင်းအရင်းတစ်ချက်ကတော့ ၂နှစ်တာကာလအချိန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ ယခုနောက်ဆုံး Android OS ဖြစ်တဲ့ Android Oreo (8.0) ကို Upgrade ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု Update ဟာ Beta Program ဖြစ်သေးတာကြောင့် Mi Box အားလုံးတော့ရရှိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ Beta Tester တွေကိုတော့ အခု Update မတိုင်မီ ပထမအပတ်မှာကတည်းက စမ်းသပ်အသုံးပြုဖို့ ပေးတားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အချိန်အားဖြင့် ၂နှစ်တာနီးပါးကြာမြင့်နေတဲ့ Smart Device တစ်ခုကို လက်ရှိနောက်ဆုံး OS Upgrade လုပ်ပေးတာဟာ အတော်လေးတော့ထူးဆန်းနေပါတယ်။ Mi Box တွေဟာ ဘယ်တုန်းကမှ Android Nougat ရဲ့ Final Update ကိုတောင်ရရှိခဲ့တာမဟုတ်ပဲ အခုမှသူ့ထက်ပိုမြင့်တဲ့ Version ကို Update ပေးနေတဲ့အတွက်ပါ။ ဘာပဲပြောပြော Mi Box အသုံးပြုသူတွေရှိသေးရင်တော့ ဒါဟာ အတော်လေးဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ ခုချိန်ထိ Update မရသေးဘူးဆိုရင်တောင် စိတ်မပျက်ပဲ Stable Version ကို Update ချပေးတဲ့အချိန်ထိ စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Mi Box မြားအတှကျ Android Oreo Update ထုတျပေးလိုကျတဲ့ Xiaomi
Xiaomi ရဲ့ Mi Box ဆိုတာကတော့ အိမျသုံးရိုးရိုး TV ကို Android Smart TV အဖွဈပွောငျးလဲပေးနိုငျတဲ့ လကျတဈဝါးစာ သတ်ေတာလေးတဈလုံးပါ။ အဆိုပါ Mi Box ကို 2016 ခုနှဈမှာ နိုငျငံတကာကိုတငျသှငျးဖွနျ့ခြိခဲ့ပွီး ခုခြိနျထိကို လူကွိုကျမြားနတေဲ့ Smart Device တဈခုဖွဈနပေါသေးတယျ။
ပိုပွီးလူကွိုကျမြားနစေမေယျ့အကွောငျးအရငျးတဈခကျြကတော့ ၂နှဈတာကာလအခြိနျကွာပွီးတဲ့နောကျမှာ ယခုနောကျဆုံး Android OS ဖွဈတဲ့ Android Oreo (8.0) ကို Upgrade ပွုလုပျပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခု Update ဟာ Beta Program ဖွဈသေးတာကွောငျ့ Mi Box အားလုံးတော့ရရှိခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ Beta Tester တှကေိုတော့ အခု Update မတိုငျမီ ပထမအပတျမှာကတညျးက စမျးသပျအသုံးပွုဖို့ ပေးတားတယျလို့ဆိုပါတယျ။
အခြိနျအားဖွငျ့ ၂နှဈတာနီးပါးကွာမွငျ့နတေဲ့ Smart Device တဈခုကို လကျရှိနောကျဆုံး OS Upgrade လုပျပေးတာဟာ အတျောလေးတော့ထူးဆနျးနပေါတယျ။ Mi Box တှဟော ဘယျတုနျးကမှ Android Nougat ရဲ့ Final Update ကိုတောငျရရှိခဲ့တာမဟုတျပဲ အခုမှသူ့ထကျပိုမွငျ့တဲ့ Version ကို Update ပေးနတေဲ့အတှကျပါ။ ဘာပဲပွောပွော Mi Box အသုံးပွုသူတှရှေိသေးရငျတော့ ဒါဟာ အတျောလေးဝမျးသာစရာကောငျးတဲ့သတငျးတဈခုဖွဈမှာပါ။ ခုခြိနျထိ Update မရသေးဘူးဆိုရငျတောငျ စိတျမပကျြပဲ Stable Version ကို Update ခပြေးတဲ့အခြိနျထိ စောငျ့ကွညျ့ဖို့အတှကျ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
by 2B . 10 hours ago